China Perforated pani-YA313 vagadziri uye vanotengesa | Yingjiwei
Zvimiro zvealuminium perforated pani
1. Nyore kugadzirisa uye kuumba
2. Inogona kupendwa kana kupukutwa
3. Nyore kuisa
4. Akanaka kutsvinda
5. Makobvu akasiyana uye saizi
6. Kunaka kwezwi kwakanaka
7. Multiple sarudzo yekuzarura uye kurongeka
8. Chiedza chechiedza
9. Hupenyu hwakareba hwebasa
10. Saizi yekugadzirisa saizi
11. Super vanopfeka kuramba
12. Kusununguka kwezvakatipoteredza, inogona kuve 100% yakashandiswazve.
Aluminium perforated pani yakagadziriswa nehunyanzvi CNC kana laser yekucheka michina yekurova ese marudzi emakomba akadai sedenderedzwa, ellipses, zvikwere, maRombomb, hexagoni, maruva maruva uye mamwe maburi akasiyana uye hapana dambudziko re burr. Aluminium perforated veneer, inonziwo punching aluminium veneer. Mushure mekurova mhando dzese dzemakomba, zvinomanikidzwa nekukotama muchina. Iyo yepamusoro inogadzirwa ne fluorocarbon kana poda kupfeka, kuitira kudzivirira ndiro yealuminium kubva kune yakasikwa oxidation, kana kugadzira akasiyana mavara anodikanwa ekuonekwa kwakanaka, kuti iyo aluminium veneer ive yakajeka, iyo inoita basa rakakosha mukushongedza kwekuvaka uye runako maturo.
Icho chigadzirwa chine ruzha rwakaderera uye basa rekushongedza. Panguva imwecheteyo, ine hunhu hwechiedza chemwenje, kupisa kwakanyanya kupisa, kupisa ngura, kupisa moto, humbowo-husina simba, kushamisika, kugadzikana kwemakemikari, chimiro chakanaka, ruvara rwakanaka uye nekushongedza kwakanaka. Iyo zvakare inobatsira kune mweya, kupisa kupisa uye kuunza yakawanda mwenje.
Chigadzirwa zita Aluminium perforated pani
Chinhu It. YA313
Pashure: Aluminium pani-YA103
Zvadaro: Akavezwa paneeli-YA204